Dhibaatada Dhaqaale ee caalamku way sii socon haddaan Covid-19 tallaal loo helin - Tilmaan Media
Dhibaatada Dhaqaale ee caalamku way sii socon haddaan Covid-19 tallaal loo helin
Maqaal ay wada qoreen madaxa Hay’adda Lacagta Adduunka IMF Kristalina Georgieva iyo Madaxda qaybta dhaqaalaha ee Hay’adda Gita Gopinath ayay kaga dayriyeen xaaladda dhaqaale ee caalamku wajjahayo haddaan cudurka Koronafayras loo helin tallaal.
“Dhaqlaaha caalamku dib usoo noolaan ayuu samaynayaa kadib culayskii kasoo gaaray Koronafayras, laakiin uma badna in si buuxda dhaqaalaha caalamku usoo kabto haddaan lahelin tallaal” ayay tiri Kristalina Georgieva.
Masuuliyiintaan katrisan IMF ayaa dowladaha ugu baaqay in ay sii wadaan taageeridda ganacsiyada iyo shaqaalaha, maadaama cudurkaan uu keenayo burburka shirkadaha iyo shaqo la’aanta oo badata.
“Inkastoo wali fayrasku jiro, haddana fududaynta xayiraadihii lasoo rogay waxay keentay kor ukac ku yimaada wax soo saarka, gadashada, iyo shaqaalaysiinta” ayaa lagu yiri maqaalka lagu faafiyay wargayska Foreign Policy ee laga leeyahay Maraykanka.
“Faragalinta xoogan iyo dagdagsiimaha taageerada dowladaha ayaa khafiifiyay saamaynta cudurka islamarkaasna suuragaliyay dib usoo laabashada kobaca dhaqaalaha” ayaa lagu yiri maqaalka.
Georgieva iyo Gopinath ayaa sheegay in kasoo kabasho buuxda aysan dhawayn inta cudurku jiro, waxayna dowladaha uga digeen inay joojiyaan taageerada ay siiyaan ganacsiyada iyo shaqaalaha.
Waxaa lagama maarmaan ah in ganacsiyada sii shaqeeyaan xittaa kuwa kacay waaa in dowladduhu taageeraan iyagoo iibsanaya qayb kamid ah ama siinaysa daymo dulsaarkoodu fudud yahay. Waxay dowladaha ku dhiiri galiyeen inay si taxaddarle u isticmaalaan dhaqaalaha yar ee ay haystaan.
Maadaama ay haatan socotta tijaabada 128 tallaal, waxaa jirta fursad wayn oo lagu heli karo tallaal, laakiin waa in aan lala yimaadaa xuluul wajjiyo badan si dhaqaaluhu horay ugu sii socdo.
Shirkii madaxda Soomaalida Muqdisho oga furmi lahaa oo dib loo dhigay